လွှတ်တော်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ - မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာ၏ ခက်မသုံးဖြာဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ကို ပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခြင်းတို့ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေကြီးလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များအား ခွဲဝေအပ်နှင်းထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မြို့နယ်ကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လူဦးရေကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ တူညီစွာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဟူ၍ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ပါရှိသည်။
တိုင်းဒေသကြီး (၇)ခုတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တစ်ရပ်စီနှင့် ပြည်နယ် (၇)ပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သတ်မှတ်ဦးရေအတိုင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည် စာရင်းတင်သွင်းသည့်တပ်မတော်သားများပါဝင်သည်။
လျော်ကန်သင့်မြတ်သော လူဦးရေရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေပြုရေးတွင် ထိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးကို (၆-၇-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး (၃၁-၃-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦး၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ (၉၁၈၆)သိန်း ရှိပြီး အရွယ်အစားမှာ ၂၀၀’ x ၉၄’ x ၄၅’ ဖြစ်ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသည် အကျယ်အဝန်းအနေဖြင့် မြေဧရိယာ ၂.၈၀၉ ဧကဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တစ်မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီဖြင့် (၁၀)မြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် (၂၀)ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်သော တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦး၊ မွန်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသား ၁၀၀ ဦးလျှင် ၀.၁%နှင့် အထက် အချိုးဖြင့် ဗမာတိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး၊ ပအို့ဝ် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး စုစုပေါင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၉ အရ ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ (၅)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ –
(က) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။
(ခ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားလိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက အကြောင်းကြားလျှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ဖိတ်ကြားရမည်။
(ဂ) ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားလိုကြောင်း အကြောင်းကြားလျှင် လိုအပ်သလို စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(ဃ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ဆဲအကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအဖွဲ့အစည်းဝင်များ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြစေရန် ဖိတ်ကြားခွင့်ရှိသည်။
(င) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရသော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အခြားတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များဆောင်ရွက်ရမည်။
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်း၊ လွှတ်တော်ရုံးလုပ်ငန်းများကို အနီးကပ်ဦးဆောင် ကြီးကြပ်ပါသည်။ လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသောရေးရာကော်မတီအလိုက် ရေးရာလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဦးဆောင်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သည် –
(ခ) နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပေးပို့သောသဝဏ်လွှာနှင့် ဥက္ကဋ္ဌကခွင့်ပြုသော အခြားသဝဏ်လွှာများကို ဖတ်ကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(င) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
(စ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(ဆ) အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊၊
(ဈ) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်ပြုသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး(အဋ္ဌမနေ့)ကျင်းပခြင်း ...
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ချက် အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း ...
ကော်မတီ [ ၆ ] ရပ်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာများနှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ချက် အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ သံလွင်ဥယာဉ်အနီး၊ အထက်လမ်းမကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့။
(+95)0572 027 492
အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ Website များ
2022 Copyright © All Rights Reserved. မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်. Creative by Digital Dots.